Firavaka volafotsy Sterling amin'ny endriny maro karazana
Kirin firavaka orinasa, natokana ho an'ny asa ny 925 firavaka volafotsy, toy ny, 925 Sterling Silver Earrings, 925 sterling bracelet, 925 sterling bangles., Sns Kirin's Jewelry series dia misy sub-vokatra marobe. Ny firavaka dia mandinika tsara ny fahamendrehana sy ny lazan'ny orinasa. Mifehy fatratra ny kalitao sy ny vidin'ny famokarana izahay amin'ny famokarana. Ireo rehetra ireo dia manome antoka ny kavina ho azo itokisana sy mendrika ny vidiny.
Zavamaniry Volavola 925 Volavola volafotsy marika CZ Ruby kavina miaraka aminny baoritra volamena mainty 300040
Zavamanitra Volavola Volafotsy 925 Volavola volafotsy CZ Ruby Amin'ny kavina volamena mainty 300040 https://www.kirinjew.com
Kavina manokana farafara 925 Sterling volondohan-kafatra ho an'ny vehivavy amin'ny rindrina volamena 35802
Kavina manokana fakan-jaza volafotsy 925 amin'ny kavina volamena miaraka amin'ny rindrina volamena 35802 https://www.kirinjew.com
Taratasy OEM Chains 925 Fehin-kibo volafotsy vy amin'ny famafazana Rhodium ho an'ny vehivavy 71612
Taratasy OEM Chains 925 Vavaky volafotsy misy vy miaraka amin'ny famafazana Rhodium ho an'ny vehivavy 71612 https://www.kirinjew.com
Fantson-drano mivarotra boka 925 peratra CZ Volafotsy marika ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny Plated Rhodium 102263
Rivaky rano mangatsiaka 925 peratra CZ volafotsy marika ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny vatan'i Rhodium 102263 https://www.kirinjew.com
Laser amin'ny anaran'ny orinasa mpanjifa na logo amin'ny firavaka:
Misy endrika 50 000 mahery ao amin'ny efitrano fampirantiana misy anay, misy peratra, kavina, pendants, rojo vy, fehin-tànana, bangles, brooch, firavaka firavaka. Azonao atao ny misafidy ny fomba tianao amin'ny rakitsoratry ny firavaka, ary rehefa apetrakao ny baiko dia azonao atao ny mangataka ny mametraka ny sary famantarana na ny anaran'ny orinasa eo amin'ny firavaka.
1) singa 1,2 tapitrisa isan-taona
2) 15-45andro ora fanaterana
3) Ny vidin'ny fifaninanana tsara indrindra
4) Drafitra maherin'ny 50.000 ao amin'ny efitrano fampirantiana
Kirin Jewelry Company dia mpanamboatra, mpivarotra ambongadiny ary mpanondrana any Zhuahai, Provinsi Guangdong, Sina, miaraka amina mpiasa 500 eo ho eo, entana 1,2 tapitrisa isan-taona. Izahay dia mamokatra firavaka volafotsy / varahina 925 amin'ny endriny maro isan-karazany, ao anatin'izany ny peratra, kavina, pendants, rojo, fehin-tànana, bangles ary brooches misy vatosoa sarobidy, vato sentetika ary zirconia cubic, vita tsara amin'ny volafotsy, rhodium, na mainty rhodium, volamena sy raozy vita amin'ny volamena.
Ny firavaka dia manasongadina ny fifehezana kalitao isaky ny dingana amin'ny asa firavaka. Sakanantsika ny lesoka izay mety hahatonga ny firavaka tsy tianay alohan'ny hahatongavan'izy ireo amin'ny mpanjifantsika.